Wasiirka arimaha gudaha oo maanta xariga ka jaray xarun cusub oo ay yeelatay waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha
Munaasabadan xariga looga jarayay xaruntan cusub ee waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaliya oo Maanta lagu qabtay garoonka diyaaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho ayaa Waxaa ka qeybgalay wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka C/kariim Xuseen Guuleed taliyaha Hogaanka Socdaalka iyo jinsiyadaha Gen.C/laahi Gaafoow Maxamuud danjiraha dowlada Japan ugu Qeybsan Soomaaliya iyo mas,uuliyiin kale.
Taliyaha hogaanka socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya Gen.C/laahi Gaafoow oo ugu horeyn goobta Kahadlay ayaa sheegay in hay’adda IMO ay hirgelisay xaruntan islamarkaana ay gacan ka geysatay Dowlada Japan waxa uuna xusay iney qeyb weyn ka qaadan doonto howlaha garoonka iyo dadka Imaanaya iyo sidoo kale kuwa ka duulaya.
Danjiraha dowlada Japan u qaabilsan Soomaaliya oo isna goobta kahadalay ayaa tilmaamay in howshan Ay mudo ka shaqeynayeen islamarkaan ay dowlada Japan diyaar utahay sidii loo horumarinlahaa Hay’adaha dowlada ee mudada kabadan 22 sano ku burburay dagaaladii wadanka kasocday.
Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga Qaranka Mudane C/kariim Xuseen Guuleed oo xariga kajaray Xaruntan cusub ayaa u mahad celiyay cid kasta oo gacan kasiisay waaxda socdaalka howshan iyo Maamulka waaxda socdaalka Soomaaliyaba isagoo intaa ku daray in waaxda socdaalku muhiimad gaar Ah uleedahay dalka maadama loo bahaanyahay in la hubiyo dadka soo galaya dalka iyo kuwa ka sii Duulaya maadama xiligan uu isbedel weyn ka dhacay dalkeena oo ay kordheen dadka kusoo qulqulaya.
Ugu danbeyntii wasiirka ayaa kusoo wareegay qeybaha ay kakoobantahay xaruntan maanta xariga laga Jaray oo wax weyn ka bedeli doonta howlaha garoonka diyaaradaha maagalada mqudisho.
Horumaro waaweyn oo dhinac walba leh ayey gaartay sanadihii ugu danabeeyay magaalada Muqdisho Iyadoo dowlada Soomaaliyana ay dhexda u xiratay sidii ay wadanka ugu soo celin laheyd heybadii uu lahaa intii aanan burburin kahor.